रुपन्देहीमा वर्षैपिच्छे गाेली हानी हत्या गर्ने मनाेजकाे यस्ताे छ भित्री रहस्य, त्यसकारण प्रहरीले पक्राउ गर्दैन ?
पुस २२, रुपन्देही ।
एउटै व्यक्तिले बर्षैपिच्छे रुपन्देहीमा एमाले कार्यकर्तामाथि गाेली प्रहार गरी हत्या गरेका छन् ।
गत बर्ष युव संघ रुपन्देहीका जिल्ला अध्यक्षा दुर्गा तिवारी र यस बर्ष अर्थात हिजाे नेकपा एमाले रुपन्देहीका स्थानीय नेता बलु भनिने बसन्त पौडेलमाथि गोली हानेको हत्या गरियाे । पौडेल एमाले रुपन्देही १ का अध्यक्ष निलकण्ठ पौडेलका छोरा पनि हुन्। उनिहरु दुवै एमाले निकटका व्यवसायी हुन् ।
याे हत्याकाे जिम्मा गुण्डा नार्इके भनेर भिनिने मनाेज पुनले लिएका छन् ।
काे हुन् मनाेज ?
दुर्गा तिवारीकाे हत्या पछि फरार रहेका मनोज पुन पुन रुपन्देही देवदह नगरपालिका २ का बासिन्दा हुन् ।
नेकपा एमालेको युथ फोर्समा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर एकका कोषाध्यक्षसमेत भइसकेका पुन रुपन्देहीको देवदह क्षेत्रमा ठेक्कापट्टाको काममा संलग्न भएका थिए । केही समय अघि उनी एमालेको युवा संघबाट कारवाहीमा परेसँगै माओवादीका एक स्थानीय नेतासँग मिलेर ठेक्का पट्टाको काममा संलग्न थिए ।
युथफोर्सबाट निकाल्नमा युथ फोर्सका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका दुर्गा तिवारीको हात रहेको भन्दै पुनको तिवारीसँगको समबन्ध विग्रिएको थियो । विभिन्न कारोबार गर्दै अाएक तिवारी र पुनबीचको समबन्ध विग्रिएसँगै पुनले उनलार्इ निशानामा पारेका थिए । उनले गत वर्षको पुस ४ गते तिवारीलार्इ गाेली हानेर हत्या गरेका थिए ।
खासगरी पुनको समूहले व्यवसायीहरुसँग चन्दा माग गर्ने, नदिए अपहरण र गोली हानेर आतंक मच्चाउने गर्दै आएको प्रहरी भनाइ छ ।
शुक्रबार पौडेलमाथि गोली प्रहार भएलगत्तै रुपन्देहीका सञ्चारकर्मी र विभिन्न व्यक्तिलाई फोन गरी मनोज पुनले हत्याको जिम्मा लिएको बताइएको छ। प्रहरीले यस बारेमा केही भनेको छैन। दुर्गा तिवारी काण्डमा पनि पुनले यसरी नै हत्याको जिम्मेवारी लिएका थिए।
गत भदौमा रुपन्देही मणिग्रामका व्यवसायी दुर्गालाल भण्डारीमाथि पनि गोली प्रहार भएको थियो। त्यसको जिम्मा पनि मनोज पुनको समूहले लिएको थियो । भण्डारी बच्न सफल भएका थिए।
किन पक्राउ पर्दैनन् मनाेज ?
दुर्गा तिवारी हत्याको आरोपमा ८–१० जना जति पक्राउ परेको र उनीहरु कारागारमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी पवनकुमार भटराईले जानकारी दिए।
त्यस्तै अरु घटनामा संलग्न पुनले परिचालन गरेका भनिएकाहरुलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटनामा संलग्न केही पक्राउ परेपनि मुख्य आरोपी पुन भने पक्राउ परेका छैनन्। उनी नेपाल बाहिर रहेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीले बताउने गरेको छ।